Champions league: Milicsiga taariikhda iyo kulanka caawa ee Atletico v Real
HomeChampions LeagueChampions league: Milicsiga taariikhda iyo kulanka caawa ee Atletico v Real
Atletico iyo Real Madrid waxay xili ciyaareedkii sannadkii iska hor yimaaddeen shan jeer oo ay ku jirto ciyaartii faynalka Champions League ee ay Real Madrid sida mucjisada ah uguu guuuleysatay. Xili-ciyaareedkanna waxay iska hor imanayaan lix jeer oo ay ku jirto labada ciyaarood ee midna ay caawa kulmi doonaan iyo is-araggiisa kale oo ay ciyaari doonaan 21ka bishan.
Labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Madrid, waxa ka dhaxaysa cadaawad guun ah oo fogaatay, waxaana hadda la arkayaa in ay mar kale xafiiltankoodii dib u soo celiyeen sidii ay ahaayeen sannadihii 1960-yadii iyo 1970-yadii, wakhtigaas oo ay Real Madrid si weyn uga awood weynaan jirtay Atletico isla markaana ay noqotay kooxda koowaad ee laga xuso magaalada Madrid.
Kooxda Boqortooyada ee Los Blancos (Real Madrid), mar kaliya xili ciyaareedkan kamay badinin Atletico. Kulankii koowaad ee Spanish Super Cup ee lagu qabtay Bernabeu waa ay barbareeyeen, lugtii labaadna Atletico ayaa badisay oo ku guuleysatay.
Waxa ku xigay guul darro weyn loo xasuusto oo ah ciyaartii isugu dambaysay labada kooxood, taas oo Real Madrid lagu garaacay 4-0, halka ciyaartii kalena ay ku dhamaatay barbar dhac.
Labadan kulan ee Champions League ee midna caawa dhici doono ka kalena Arbacada toddobaadka dambe ayaa noqon doona mid kale oo si weyn isha loogu hayo. Diego Simeone dhibaato kuma hayso in uu Real Madrid la ciyaaro, iskuma taxalujiyo in uu weerar badan ku qaado khaasatan marka la joogo Bernabeu Stadium. Dib ayuu isaga degaa, waxa uu xidhaa albaab kasta oo ay ka soo geli karayaan weerarka bahalka ah ee Real Madrid, waa ay ku ururaan ciyaartoy kasta oo kubadda haysta, waxaanay u diidaan fursado ay helaan.
Ancelotti wali muu helin khiddaddii uu ku garaaci lahaa Atletico. Go’aamo layaab leh ayuu sameeyey ciyaartii Spanish Super Cup markii uu beddelay Toni Kroos isla markaana uu soo geliyey Jese halkii uu ka keeni lahaa Khedira.
Rasmi: Sanchez Oo Ku Biiray Man United, Mushaharka Uu Qaadan Doono Iyo Faahfaahinta Qodobbada Heshiiska
22/01/2018 Abdiwahab Ahmed
Xiddigii Hargeysa Ee Faarax Bashiir Oo Geeriyooday
17/08/2016 Abdiwahab Ahmed
Claudio Ranieri: Waan Jecelahay Muusiga Tartanka Champions League